Olee otú Naghachi iTunes Library mgbe Draịvụ jiri
Naghachi Draịvụ Crash Lost iTunes Library
> Resource> iTunes> Naghachi Draịvụ Crash Lost iTunes Library
"A ike mbanye jiri on m ochie PC na m nwere ike iji ya ọ bụla ọzọ. M na zụrụ a ọhụrụ PC wee Kacha ọhụrụ iTunes. Otú ọ dị, m nwere ike na ibudata m zụrụ songs on iTunes. N'ihi na songs na m na dị n'ime si CD na-adịghị n'ebe, ma m iPod. Mgbe m na-agbalị ka mmekọrịta songs (e nwere ọtụtụ puku) na iTunes, ya kwuru ihe nile ga-ehichapu ya. Enwere ụzọ naghachi iTunes Library na m iPod? bụla aro? "
Ike mbanye na kọmputa odida nwere ike ime ka iTunes Library tụfuru. Na-emekarị, ọrụ ike naghachi iTunes zụrụ ihe, dị ka songs, ngwa,-egosi na TV. Otú ọ dị, n'ihi na songs ọrụ dị si CD, ibudatara na Ịntanetị ma ọ bụ òkè site enyi, ọ bụ nnọọ ike na-agbake. Dabara nke ọma, ma ọ bụrụ na ndị a niile songs na-rapaara na otu nke Apple ngwaọrụ, dị ka iPod, ọrụ ike ka naghachi iTunes Library mgbe Draịvụ jiri.
Nzọụkwụ maka otú naghachi iTunes Library mgbe ike mbanye jiri
Mbụ, biko jide n'aka na ị na rụziri gị na kọmputa na draịvụ ike na-arụ ọrụ nke ọma. Na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'okpuru naghachi iTunes Library.
Nzọụkwụ 1. Dowload TunesGo
TunesGo (Windows) na MobileGo maka iOS (Mac) ugbu a dị. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị. TunesGo (Windows) ugbu a na-akwado iPhones, iPads, na iPod aka na-agba ọsọ iOS 5/7/6 na ndị ọzọ ụdị iPod. Iji hụ ma gị apple ngwaọrụ a na-akwado ma ọ bụ, biko pịa ebe a. TunesGo (Mac) na-akwado iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, wdg na-agba ọsọ iOS 5/6/7. Mụta ihe banyere tech nkọwapụta nke TunesGo (Mac).
Nzọụkwụ 2. Jikọọ Apple ngwaọrụ na kọmputa
Mgbe wụnye TunesGo na kọmputa gị, biko agba ya na jikọọ na gị Apple ngwaọrụ na kọmputa. Lee, m na-esi naghachi iTunes Library si iPod na Wondershare TunesGo Windows version dị ka ihe atụ. Mgbe ejikọta iPod ọma na kọmputa, TunesGo ga chọpụta na-egosipụta na iPod na isi window.
Nzọụkwụ 3. naghachi furu efu iTunes Library mgbe ike mbanye jiri
Na ekpe nke isi window, ị pụrụ ịhụ ihe aha dị ka "Media". Pịa ya hụ ihe niile faịlụ na ụdị n'okpuru ya. Site na ndabara, akpa taabụ nke ọhụrụ windows bụ Music. Pịa ya, ị ga-ahụ niile songs na gị iPod. Nnọọ pịa "Smart Mbupụ na iTunes", mgbe niile songs n'èzí gị iTunes na-depụtaghachiri gị iTunes Library-enweghị oyiri. Ma ọ bụ ị nwere ike họrọ chọrọ songs, na pịa "Mbupụ na iTunes Library" si "Export ka" dobe-ala ndepụta.
Atụmatụ & Aghụghọ:
Ị na-ahụ, otú mfe ọ bụ na-agbake furu efu iTunes Library. Echegbula onwe gị banyere ike mbanye okuku ọ bụla ọzọ. Ma, ị kwesịrị ị mmekọrịta gị na iTunes gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod mgbe nile na ikpe nke na ida gị iTunes Library enweghị ndabere.
Get TunesGo na-agbalị iji naghachi ike mbanye okuku furu efu iTunes Library!
10 Atụmatụ Iji Mee iTunes 10 agba ngwa ngwa